Ciidanka huwanta oo la wareegay deegaanka Beer-xaano ee duuleedka Kismaayo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka huwanta oo la wareegay deegaanka Beer-xaano ee duuleedka Kismaayo
Wararka naga soo gaaraya gobolka J/hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada maamulka Jubbaland oo garabsanaya kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo AMISOM ay la wareegeen deegaanka Beer-xaano oo hore ugu sugnaa ciidanka Al-shabaab.
Ciidankaan huwanta ayaa weerar xoogan ku qaadeen saldhigyo ay Al-shabaab ku lahaayeen deegaanka Beer-xaano ee duuleedka Kismaayo, waxaana halkaasi ka dhacay iska hor-imaad in muddo ah socday.
Ilaa iyo haatan lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi, inkastoo warar madax-banaan ay sheegayaan in dagaalkaasi uu geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay kulan la qaateen dadka deegaanka Beer-xaano ayna kala hadleen sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka, bulshadana ay ula shaqeyn lahaayeen ciidamada huwanta ah ee la wareegay gacan ku haynta deegaankaas.
Dhinaca kale, ciidanka Al-shabaab ayaa in muddo ah maamulayay deegaanka Beer-xaano oo ku yaala duuleedka magaalada Kismaayo, waxaana sida la sheegay intii ay halkaasi ku sugnaayeen ay dadka deegaanka ku haayeen caburin xoogan.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa dhawaan shaaca ka qaaday inuu bilaabanayo howlgalka Wabiga Jubba, kaasi oo Xarakada Al-shabaab looga saarayo deegaannada ay kaga sugan yihiin Jubbaland.